သံတွဲဈေးဆောက်လုပ်ရာတွင်ငွေကျပ်သိန်း(၇၀၀၀)ကျော်ကိုယ်ကျိုးရှာအလွဲသုံးစားလုပ်ကြခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သံတွဲဈေးဆောက်လုပ်ရာတွင်ငွေကျပ်သိန်း(၇၀၀၀)ကျော်ကိုယ်ကျိုးရှာအလွဲသုံးစားလုပ်ကြခြင်း
Posted by Nu Than on Apr 27, 2013 in Creative Writing, Myanmar Gazette, News |9comments
အတိုင်းရမည်မဟုတ်ဘဲ ၉ ပေဆိုင်ခန်းများကို၈ပေရမည်ဆိုကာပုံကိုဈေးသူဈေး
ယခင်ဈေးဆိုင်ခန်း ၉၀ဝ ကျော်ရှိခဲ့ရာ ဆောာက်လုပ်ရာတွင်ခက်ခဲမည်ပြောပြီးတကယ်ဆောက်လုပ်သောအခါ ကန်ထရိုက်၊ကော်မတီ
များအတွက် ယခင်ဆိုင်ခန်းများကို အိမ်သာခန့်သေးငယ်လိုက်ပြီးဆိုင်ခန်းအပို ၂၀၀ဝ အထိ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ပြီး ဈေးကော်မတီများကို
၂ ခန်းစီးလက်ဆောင်ပေးထားပါသည်။ဈေးကော်မတီဥိးစိုးမြင့်မှာလည်း ယခင်ကဈေးဆိုင်ခန်းမရှိသောလည်းလမ်းမကြီးဘေးထောင်ဆိုင်ခန်း ၁ ခန်းကို ကျပ်သိန်း ၁၆ဝ ဖြင့်ရောင်ချထားပြီး၊အခြားကော်မတီ
ဦးစိုးသန်း၊တိုးတိုး၊လှရွှေ၊ကျော်မြင့်။ထွန်းမြင့်၊ထွန်ကြည်စသောဈေးကော်မတီများသည်လည်း တစ်ယောက် ၂ ခန်စီ ရရှိပြီး ယခခုအခါ ၎င်းတို့လုပ်စားထားသညိကုဖုန်းကွယ်ရန် အတင်းသဘောတူကြောင်းလက်
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ အသေအချာ စီစစ်လေ့လာပြီး
တရားဥပဒေ အတိုင်း အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းဖို့လိုမယ်……….
တကယ်လို့ တရားဥပဒေ အရအရေးယူရာမှာ သူတို့လက်ထဲ
ရေရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ထိရောက်မှု ရှိမရှိကလည်း မသေချာပြန်ဘူး…..
ကျုပ်တို့ နိုင်ငံမှာကလည်း အခြားနိုင်ငံတွေမှာလို မဟုက်တာလုပ်တဲ့လူကို….မကျေနပ်ရင်
စနိုင်ပါနဲ့ ချောင်းပစ်တာတို့… အသေခံဗုံးခွဲပြီး ပညာပြလိုက်တာတို့ လုပ်ဖို့ သတ္တိရှိတဲ့လူက
တစ်ခါမှ မကြားဖူးသေးဘူး…. တလွဲ ဆံပင်ကောင်းနေ့တဲ့ သတ္တိခဲတွေသာ ခဏခဏ
မြန်မာပြည် လဒ်စားတာ ကို ဘယ်တော့များမှ ပျောက်အောင်လုပ်နိုင်ကြမလဲမသိ။အောက်ခြေတွေဘဲလိမ့်ခံနေရတယ်။အပေါ်ဆုံး ကအောက်ထိဘဲ။
မြန်မာပြည် မှာ လဒ်စားခြင်း ကို ဘယ်သောအခါမှ ထိထိရောက်ရောက် နှိမ်နင်းကြမလဲနော်
သံ တွဲသား says:
nu than ဆိုုတဲ. လူ …ကိုုရေးတာကိုု တာဝင်ယူရဲရင် ခင်ဗျား အိမ် adress , name နဲလိပ်မူ ပြီး သမ္မတရုုံးကိုုစာတင်ပါလား ဘာမှမသိတဲ.လူတွေကိုု လျှောက် ရေးပြီး သတင်းလွှင်.မနေနဲ. ဘာဆိုုင် ခန်း ၂၀၀ဝ ထိလဲ ( — Deleted by Mod6— )..
ခင်ဗျား ( — Deleted by Mod6— ) ပဲ ဖြစ်မယ် ရေးထားတဲ. post တိုုင်း မဟုုတ်တာ ကများနေတယ် ကျူပ်တိုု. သံတွဲက ရခိုုင်တွေ ဒါမျိူး မရေးဘူး …ကျုူပ် ဈေးထဲနေ.တိုုင်းရောက်တယ်.. ဆိုုင်ခန်း ၁၀၀ဝ ကျော်ပဲ ရှိတယ် ..
( — Deleted by Mod6— ) … သတွဲမြို့ အေးချမ်းနေတာကိုု
( — Deleted by Mod6— ) ပြသနာ လိုုက်မလုုပ်နဲ.
( — Deleted by Mod6— ) မှ အသိညာဏ် မရှိ ..
သခင်ကိုု ပြန်ကိုုက်တဲ.( — Deleted by Mod6— ) …
mandalay gazette က aditor ဆရာတွေလဲ post တင်တာတွေ ကိုု စစ်ဆေးစေချင် တယ် .. တော်တော်များများ ကမဟုုတ်တာတွေများ နေတယ် .. သတင်းမဟုုတ်ပဲ .. ကိုုနဲ.အဆင်မပြေတာနဲ. အတင်းပြောတလိုုရေးနေတလိုုပဲ … မသိတဲ.လူကျတော.ယုုံရော..ဒါဟာ internet news ဖတ်တဲ.သူတွေကိုုစော်ကားနေတာပဲ ကျွန်တော်လဲ သံတွဲမှာ ခေတ်စားနေလိုု. ဝင်ကြည်.တာ … စိတ်ပျက်သွားတယ် …
ဒီမိုကရေစီမှာ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိပါတယ်၊ဒါပေမဲ့ ကိုပြောတဲ့စကားကို တာဝန်ယူနိုင်တာဝန်ခံနိုင်ရပါမယ် Face book မှာ Online မှာ စာလေးတစ်ကြောင်းတင်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Post လေးတစ်ခုရှဲ လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် တာဝန်ယူနိုင်၊ တာဝန်ခံနိုင် ရပါမယ်။ တာဝန်ယူတဲ့နေရာမှာလဲ ဘယ်လိုပုံစံဆိုတဲ့အတိုင်းအတာရှိပါတယ် မိမိသိရှိထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်ရဲ့ ခိုင်လုံ တိကျမှု၊ အဲ့ဒီအပေါ်သုံးသပ်ရှုမြင်နိုင်တဲ့ မိမိရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်းလင်းနိုင်မှု၊ မိမိတင်လိုက်တဲ့ အကြောင်းအချက်ရဲ့ ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှု ဖြန့်ဝေနိုင်မှုအတိုင်းအတာ၊ ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အကြောင်းမဲ့ပြသာနာတွေကိုဖြန့်ဝေ မှုဟာ သင်ကိုယ်တိုင်မီးခြစ်ဝေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားစေနိုင်တာကို သတိပြုရပါမယ်။
လောလောဆယ်မတော့ သူ့ဟာသူ ဧပြီထဲ က ငြိမ် နေတဲ့ သတင်းကို ရှင် ဝင်ပြီး မှတ်ချက်တွေ မပြီးနိုင်မစီး နိုင်ပေးနေ မှ ပိုပြီး ပွ သွားမယ် ကို သံတွဲသား ရေ့။
မဟုတ်တဲ့သတင်း ဆိုရင် သိပ်စိတ်မပူပါနဲ့လေ။
အင်တာနက် ထဲ မှာ အမှား တွေ တင်တာ၊ ဖွတာတွေ တင်တာ များလွန်းပြီး
ကျား ကျား ဆိုရင်တောင် တကယ်မယုံဘဲ ရှိတော့မှာတောင် စိုးရတာ။